सल्यान घटना थप रहस्यमय, युवतीको शव परिवारले बुझ्न मानेनन्, के भन्छ प्रहरी ? – PathivaraOnline
Home > समाचार > सल्यान घटना थप रहस्यमय, युवतीको शव परिवारले बुझ्न मानेनन्, के भन्छ प्रहरी ?
Poonam June 19, 2021 समाचार	0
एक महिलाको शव परिवारले बुझ्न मानेका छैनन् । उनीहरुले घटना शं कास्पद रहेको बताएका छन् । साथै उनीहरुले घटनाको गहिरो अनुसन्धानको समेत माग गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार खिमा खड्का असार १ गते खोलामा मृ त फेला परेकी थिइन् । दार्मा गाउँपालिका ५ की २९ वर्षीया खिमा खड्काको परिवारले सल्यान जिल्ला अस्पताल सल्यानमा रहेको शव बुझ्न मानेका छैनन् ।
खिमाका आफन्तले परीक्षण भएको पाँच दिन पुगी सक्दा पनि शव बुझ्न नमानेका हुन् । गत जेठ ३१ गते बेलुका देखि सम्पर्क बिहान भएकी उनी असार १ गते दार्मा गाउँपालिका स्थित ठुला खोलामा मृ त फेला परेकी थिइन् ।
खड्कालाई खोलाले बगाएको नभई घटना अर्कै भएकाले यसको सत्य तथ्य छानबिन र दोषीलाई कारबाही नहुँदासम्म शव नबुझ्ने खिमाका बुवा गणेश बहादुर खत्रीले बताए । सुनियोयजित ढंगले घटना गरेर खोलामा फालिएको भन्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक नभएसम्म शव नबुझ्ने मृतकका श्रीमान् खिम बहादुर खड्काको भनाई छ ।
खोलाले बगाएको भनिएता पनि महिलाको घटना गरेर खोलामा फालिएको आफन्तको भनाई छ । यस्तो कार्यमा संलग्नको पहिचान गरी कानुनी दायरामा नल्याएसम्म शव नबुझ्ने श्रीमान खड्काको भनाई छ । खड्काको विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी प्रमुख गोविन्द थापाले बताए ।आफन्तले शव बुझ्न मान्नु भएको छैन हामी गहिरो अनुसन्धानमा छौ, थापाले भने । प्रतीकात्मक तस्वीर
शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण पाइने पक्का ,यस्तो छ ऋण लिने प्रक्रिया -सबैलाई सक्दो शेयर गर्नुहोस
दोस्रो बिहे गर्दैगर्दा बिरोध गर्नेलाई स्वेताको यस्तो मर्मस्पर्शी जवाफ! एकपटक अवस्य पढ्नुहाेस्
भर्खरै आयो रेशम चौधरी बारे यस्तो खबर, सर्वोचले दियो यस्तो आदेश
गलत सुई लगाएका कारण छोरी जन्मिएपछि…
मा’प’सेमा पक्राउ परेका एक जोडीले पुलिसकै कारमा यौ’न स’म्प’र्क राखेपछि….
घरवाट कार्यालय जान हिँडेका उनी बाटोवाटै कसरी हराए ! बे पत्ता प्रहरीको खोजी यसरी हुँदैछ,
इंग्ल्याण्डलाई हराउँदै इटलीले जित्यो युरोकपको उपाधि (तस्विरहरुमा हेर्नुस्)
पाटन अस्पतालका डाक्टर होटलको कोठामा मृ त फेला